के तपाइँसँग एक विचार छ, तर तपाइँलाई तपाइँको वेबसाइटमा यसलाई कसरी संरचना गर्ने थाहा छैन? वा के तपाई यसलाई अप्ठ्यारो विचारहरु लाई तपाईको वेब सामग्रीमा अनुवाद गर्न चुनौती दिइरहेको छ? वा तपाईं डराउनुहुन्छ कि यदि तपाईं आफैंमा आफ्नो वेबसाइट सामग्रीहरू निर्माण गर्न अगाडि जानुहुन्छ भने, यो कहिल्यै आवश्यक मापदण्डहरू पूरा गर्दैन। यसको मतलब तपाइँलाई सामग्री लेखन सेवाहरू चाहिन्छ।
वेबसाइट सामग्री लेखन सही श्रोताको लागि डिजाइन गरिएको वेबसाइटहरूको लागि जानकारीपूर्ण सामग्री लेखनलाई जनाउँछ। तपाईंको वेबसाइट इन्टरनेटमा तपाईंको व्यवसायको पहिचान हो। यस कारणले तपाईंलाई सबैभन्दा राम्रो सामग्रीको आवश्यक पर्दछ। तपाईंले आफ्ना आगन्तुकहरूलाई संलग्न गराउन आँखा चिम्ल्ने सामग्री प्रदर्शन गर्न आवश्यक छ र तिनीहरूलाई तपाईंको ग्राहक बन्न विश्वस्त गर्नुहोस्। Semalt मा, हाम्रो सामग्री लेखकहरूले एसईओ-आधारित सामग्री सिर्जना गर्दछ जुन तपाईंलाई SERP को पहिलो पृष्ठमा पुग्ने छ र तपाईंको आगन्तुकहरूलाई राख्न मूल्यवान र चाखलाग्दो सामग्री प्रदान गर्दछ।
Semalt सामग्री लेख्ने सेवाहरू एक निश्चित ग्यारेन्टी तरीका हो तपाईंको विचार तपाईंको दर्शकहरू समात्नका लागि। हामी तपाईंको सन्देश सही तरीकाको पार गर्नका लागि बुझ्छौं। यो प्राप्त गर्न सामग्री लेखकहरूको असफलता हो कि तपाइँ आफैले यो गर्न चाहानुहुन्छ किनकि Semalt को लागी यसको एक पैसा मात्र खर्च हुन्छ, त्यसैले पैसा मुद्दा होइन।
तपाइँ तपाइँका विचारहरू मिसिन वा गलत तथ्या published्कहरू प्रकाशित हुन चाहनुहुन्न। यद्यपि तपाई एकदम राम्रा र लेखी हुनुहुन्न। धेरै तर्क गर्न सक्छन्, तर लेखन साँच्चै एक उपहार हो। हाम्रो सामग्री लेखकहरू तपाइँसँग एक छलफल मा हुनेछ, र अचानक, यो तपाईं कुरा गरिरहेको जस्तो लाग्छ। आफैंको ऐना तिनीहरू तपाइँलाई पूर्ण रूपमा लिन्छन्, र तपाइँका विचारहरू पोडमा दुई मटर जस्तै उनीहरूको प्रतिभासँग फिट हुन्छन्।
सही विचार विकास गर्दै हप्ता, महिना, वा वर्षौं खर्च गरेपछि, तपाईंले सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ कि तपाईं उचित प्रतिनिधित्व हुनुहुन्छ। सटीक र संक्षिप्त लेखहरू प्रयोग गरेर तपाईं आफ्ना पाठकहरूसँग कुराकानी गर्न सक्षम हुनुहुन्छ।
तपाईंको वेब सामग्रीले तपाईंको वेबसाइटमा बोक्ने सम्पूर्ण छविलाई प्रभाव पार्दछ। के तपाई शैक्षिक वा मनोरन्जन गर्नुहुन्छ? यी मार्करहरूले सामग्री लेखकले प्रयोग गर्ने भाषा निर्धारण गर्छन्। तपाईंको लक्षित दर्शक को हो; यसले सामग्री लेखकले कसरी शब्दहरू प्रयोग गर्दछ भनेर निर्धारण गर्दछ। बच्चाहरूको वेबसाइटको लागि, तपाईं चंचल र मैत्री सामग्रीको अपेक्षा गर्नुहुन्छ, उच्च-आवाजका शब्दहरूले भरिएको छैन जुन तपाईंलाई तपाईंको चश्मा लगाउँदछ, एक कप पानी र धेरै शब्दकोशहरू दिन्छ। हामी सबै त्यहाँ भएका थियौं।
तपाईलाई सामग्री लेखन सेवा किन चाहिन्छ?
हाम्रो सामग्री लेखन सेवाहरू काम पाउन सक्षम हुन भन्दा बढि छन्। सम्भावित उत्तम तरिकाहरू। यो सत्य हो कि हामीसँग सबै भन्दा राम्रा लेखक छन् तर किन हामी दिमागमा केहि मुख्य बुँदाहरूसहित लेख्छौं। हामी यी सूचकहरूमा भर पर्दछौं जसले हामीलाई फेला पार्न सक्नुहुने उत्तम सामग्रीको उत्पादनमा मार्गनिर्देशन गर्न मद्दत गर्दछ।
Semalt वेब सामग्री लेखन सेवाहरूको एलिमेन्ट
हामीले लेख्न थाल्नु अघि हामी हाम्रो ग्राहकहरूको दिमागमा जान चाहन्छौं। हामी केहि प्रश्नहरू सोध्छौं कि तपाईं के चाहानुहुन्छ तपाईंको सामग्री प्राप्त गर्न। तपाइँ के चाहानुहुन्छ भन्ने बारे उत्तम परिणामहरू प्राप्त गर्ने पहिलो चरण हो। उदाहरण को लागी, के तपाइँ तपाइँको सामग्री को लागी तपाइँको पाठकहरु लाई तपाइँको उत्पादन किन्न को लागी खुशी छ, र हाँस्न वा शिक्षित बनाउन चाहानुहुन्छ?
तपाईको श्रोताको लागि तपाईंको सामग्री डिजाइन गर्नुहोस्
प्रत्येक श्रोताको प्रकारको बारेमा केहि फरक वा अद्वितीय छ। Semalt तपाइँको लक्षित दर्शकहरू फेला पार्न। हामी त्यस जानकारीलाई हामीले प्रदान गर्ने सामग्रीको प्रकारको मार्गदर्शन गर्न प्रयोग गर्छौं। वेब सामग्री उत्तम लेखिएको हुन्छ जब एक विशिष्ट दर्शक प्रकार छ। यदि तपाईंसँग विशेष व्यक्ति छैन भने तपाईं आफ्नो सामग्री सँग कुराकानी गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईंको सामग्री बहिरा कानमा खस्नेछ। हामी कल्पना गर्छौं कि हामी तपाईंको दर्शकहरूसँग व्यक्तिगत रूपमा कुरा गर्दैछौं जुन व्यक्तिगत र अनुपम स्पर्श प्राप्त गर्नका लागि हो।
तपाईसँग बहुविध दर्शक प्रकारहरू पनि हुन सक्दछ जुन पूर्ण रूपमा ठीक छ। हामी तिनीहरूलाई अनुकूलित वेब सामग्री प्रदान गर्नेछौं। उदाहरण को लागी, एक बिक्री पृष्ठ दुबै पुराना र जवान ग्राहकहरु को लागी उत्पादनहरु हुन सक्छ; हामी दुबै प्रकारका श्रोताहरूको लागि सामग्री सिर्जना गर्न सक्दछौं वा सामग्री सिर्जना गर्न सक्दछौं जुन दुबै दर्शकहरूको लागि उत्तम हुनेछ।
तपाइँको सामग्री पाठकसँगको जडानमा प्रहार गर्नका लागि यो पाठकलाई उपयोगी हुनुपर्दछ। हामी राम्रो सामग्री लेख्छौं जुन तपाईंको पाठकहरूको लागि मूल्य थप गर्दछ। Semalt मा यहाँ एक परम्परागत रूपमा हामी हाम्रो ग्राहकहरू जसले उनीहरूको सामग्रीहरू कस्तो देखिनु पर्छ भनेर उनीहरूको विचारधारा दिइरहेका ग्राहकहरूलाई सोध्छौं उनीहरूको ग्राहकलाई जवाफ दिन र श्रोतालाई सब भन्दा साधारण प्रश्नहरूको जवाफ दिन। यदि तपाईंसँग बच्चा डायपर कम्पनी छ भने, तपाईंले "कसरी डायपर बदल्ने," "आफ्ना बच्चाहरूलाई सफा राख्नुको महत्त्व," इत्यादि विषयहरूमा सामग्रीहरू आवश्यक पर्दछ। यी प्रश्नहरू तपाईंको कोठाको विषय हो र तपाईंको वेबसाइटमा त्यस्ता कुञ्जीशब्दहरू हुने गर्दछ। तपाइँको स्थान पाउनुहोस्। अधिक, आमाहरू र बुबाहरूले तपाईंको साइटको भ्रमण गर्थे, तपाईंको जानकारीलाई मूल्यवान् फेला पार्नेछन्, र तपाईंको उत्पादनहरू खरीद गर्थे।
प्राप्त गर्नुहोस् तिनीहरूको ध्यान
यो पहिलो चीज हो जुन वेब मालिकहरूले उनीहरूको सामग्रीमा खोज्दछन्। हामी सबै सहमत छौं कि सामग्री सूचित गर्न वा मनोरन्जन गर्न वा विज्ञापन गर्न हो; यद्यपि यो उद्देश्यको लागि सर्च इन्जिन अनुकूलित हुन आवश्यक पर्दछ। यदि यो फेला परेन भने, यसले मनोरन्जन जानकारी दिन वा कसैलाई तपाइँको ब्यापारको विज्ञापन गर्न सक्छ। SEO तपाईंको वेबसाइटमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरू पाउनको लागि कुञ्जी हो। विशिष्ट कुञ्जी शब्दहरू समावेश गरेर, तपाईंको सामग्री यस्तो देखिन्छ कि जोसँग यसको आवश्यकता छ, त्यसैले, उत्पन्न ट्राफिक, र तपाईंको व्यवसायको लागि रूपान्तरण। हामीसँग एसईओ र यसको फाइदाहरूको विभिन्न पक्षहरूको व्याख्या गर्ने धेरै लेखहरू छन्, तर द्रुत सारांश पाउन यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
कोही पनी गाह्रो सामग्री पढ्न चाहँदैन। गाह्रो अवस्थामा, हाम्रो मतलब धेरै लामो प्याराग्राफहरू, बिखेरिएको शीर्षकहरू, र धेरै लामो वाक्यहरू छन्। सामान्यतया, तपाइँको सामग्री को कठिनाई तपाइँको दर्शक मा निर्भर हुनु पर्छ। जे होस्, तपाईंको वेब सामग्री बुझ्न को लागी सजिलै, चिल्लो, र एक विशेष अर्डर पछ्याउनु पर्छ। तपाईको हेडिंग उचित तरिकाले व्यापक विषयदेखि सरल उपशीर्षकहरूमा प्रयोग गर्नुपर्दछ। यस तरिका, जानकारी राम्रोसँग बुझिन्छ प्रत्येक सेक्सनले अर्कोको प्रशंसा गर्दछ।
तपाइँको वेबसाइट तपाइँको ब्रान्ड फिट हुनु पर्छ। तपाईं एक कानून फर्म र एक मनोरन्जन पार्क को जस्तो ध्वनी हुनु हुँदैन। तिनीहरू दुई फरक ब्रान्ड हुन्, र तिनीहरूको सामग्री उल्लेखनीय रूपमा फरक हुन्छ। यसको आवाजको फरक टोन हुनुपर्दछ; बिभिन्न शब्दावली र अभिव्यक्तिहरू पनि प्रयोग गर्नुपर्दछ।
<< डिव << डिभिजन << डिब्बा
राम्रो सामग्रीमा सँधै केही प्रकारको कार्यको लागि कल समावेश गर्नुपर्दछ। धेरै चोटि, यो सुझाव वा सल्लाह हो तपाईंको प्रयोगकर्तालाई तपाईंको कम्पनीमा भर्ती गर्न, तपाईंको उत्पादनहरू किन्न वा हाम्रो मामलामा, तपाईंलाई हाम्रो सामग्री लेख्ने सेवाहरू खरीद गर्नको लागि। तपाईं पाठ्यहरूलाई कम विशिष्ट कार्य गर्न प्रोत्साहित गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै तपाईंको साइट मार्फत ब्राउजि useful अन्य उपयोगी जानकारी फेला पार्न।
तपाइँको वेबसाइट संरचना मामिला
राम्रो सामग्री भएको सामग्री को लागी मात्र होईन; वेबसाइटले सामग्रीको सफलतालाई प्रभावित गर्दछ। ढिलो लोड भईरहेका वेब पृष्ठहरू, नराम्रो रूपमा निर्माण गरिएका वेबसाइटहरू, अप्रसक्रिय र हार्ड-टु-नेभिगेट वेबसाइटहरूले तपाईंको आगंतुकलाई प्याकिंग पठाउँदछ। आज, मोबाइल प्रयोगकर्ताहरूको संख्या बेवास्ता गर्नको लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण भएको छ। यसको मतलब तपाईंको वेबसाइट मोबाइल उपकरणहरू, ट्याब्लेटहरू, र कम्प्युटर प्रणालीहरूसँग कॉम्प्याटेबल हुनुपर्दछ। तपाइँको वेबसाइट पूर्ण रूपले लोड हुन को लागी कोही पनि मिनेट कुर्ने छैन। इन्टरनेटमा, कुनै एकाधिकार छैन।
तपाईंको महान सामग्री प्राप्त गर्न अन्तिम टच यसलाई योग्यको मान्यता यसलाई यसलाई मार्केटिंग गर्नु जति सक्दो यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ। तपाइँको एसईओ को उपयोग संग मिलेर, तपाइँ अझै पनी सामाजिक मिडिया विज्ञापनहरु, Google विज्ञापनहरु, र ईमेल मार्केटिंग उपकरण को उपयोग चलाएर सफलता को लागी तपाइँको संभावना को बृद्धि गर्न आवश्यक छ। यस तरिकाले, तपाईंको सामग्री पहिचान हुने ठूलो अवसर खडा छ। यो किनभने खोज इन्जिनहरू र सामाजिक मिडिया प्लेटफर्महरूले पहिचान गरे कि उनीहरूसँग श्रोताहरूलाई तपाईंको सामग्री आवश्यक छ, र यदि सही गरियो भने, यो एक विन-विन स्थिति हो। तपाईंको उत्पादनहरू देखिन, विज्ञापनदाताहरूले पैसा कमाउँदछन्, र दर्शकहरूले तपाईंको सामग्री अवस्थित भएको महसुस गर्न सक्छन्।
Semalt सामग्री लेखन टीम अद्भुत टीम सदस्यहरू बाट बनेको छ जुन समर्पित छ सामग्री लेख्न जुन तपाइँको वेबसाइटमा अद्वितीय हुनेछ। हामी तपाइँको लेखमा तपाइँको छनौट जोड्न को लागी यो सुनिश्चित गर्न को लागी गर्छ कि तपाईको व्यापार नाफा कमाउने मेसिन जस्तो मात्र लाग्दैन, तर यसले तपाईको व्यवसायलाई तपाईको आगन्तुकहरुसंग जोड्ने व्यक्तिगत भावनालाई जोड दिन्छ। Semalt सामग्री लेखकहरूलाई हो भन्नुहोस् र तपाईंलाई अलग सेट गर्ने सामग्रीको मजा लिनुहोस्। आज हाम्रो टीममा सामेल हुनुहोस्!